Ny safidy tsara indrindra mankany Fintonic amin'ny Android | Androidsis
DaniPlay | 25/07/2021 15:00 | Nohavaozina amin'ny 26/07/2021 01:10 | Fampiharana Android
Fintonic dia fitaovana lehibe nandritra ny taona maro rehefa nitantana ny volan'ny tena manokana na avy any an-trano izany na avy amin'ny orinasa maro iraisam-pirenena. Nahita ny fivoahan'ny rindranasa hafa izay manao aloka lehibe amin'ny Android.
Androany dia maro safidy hafa amin'ny Fintonic amin'ny AndroidNoho izany dia asehonay anao ny tsara indrindra, ny tsirairay amin'izy ireo dia samy hafa amin'ny zavatra sasany noforonin'i Fintonic Servicios Financieros SL Maimaimpoana daholo ny fitaovana, hitranga ny fandoavam-bola raha te hampiasa kaonty maromaro ianao amin'ny fotoana iray hafa. fitaovana.
1 Mpitantana vola
5 Mpampiasa vola
10 Pro vola
12 Mpitantana ny fandaniana, fidiram-bola ary ny tetibola
13 Ny fandaniana amin'ny fanaraha-maso
Izy io dia iray amin'ireo mpitantana vola manan-danja indrindra, ho safidy tsara amin'ny Fintonic ary miaraka amina interface interface tsotra mifanaraka amin'ny karazana mpampiasa. Miaraka amin'ny Money Manager dia ho hitanao ny fandaniana amin'ny alàlan'ny sary, noho izany dia zava-dehibe ny fahitana ny fampandrenesana tsirairay amin'ny fampiharana.
Ny Money Manager dia mamela ny fitantanana kaonty maromaro amin'ny fotoana iray, izany no mahatonga azy io ho iray amin'ireo be mpampiasa indrindra, satria afaka manontany azy rehetra amin'ny tabilao ianao. Manome ny safidy ny mahita ny fifandanjan'ny kaonty isan'andro, isan-kerinandro, isam-bolana ary isan-taona aza raha tianao.
Mba hanombohana ny fampiasana azy dia mandeha amina fikirakirana voalohany izy, ampidiro ny vola ampidirinao isam-bolana, dia hampiditra ny vola miditra ihany koa ianao raha te hihazona ny fifandanjana. Ilaina ny fisoratana anarana hanombohana mahafantatra avy amin'ny tranonkala nidirany ary mivoaka ny vola, hita maso ny fifanakalozana rehetra, ankoatra ny antsipiriany hafa.
Mpitantana vola, Tracker amin'ny fandaniana
Developer: Lalao Puzzle
Iray amin'ireo fampiharana tonga lafatra izany raha te-hifehy ny haavon'ny fandaniana ianao, aseho amin'ny antsipirihany ireo zavatra izay ahena amin'ny fotoana tena izy. Wallet dia safidy tsara amin'ny Fintonic, manana famolavolana tena currado ary mampiseho ny zava-drehetra amin'ny efijery lehibe.
Ny fatra voafetra dia azo omena isaky ny sokajy Mba tsy hamoahana fandaniana tsy ampoizina, ny rindrambaiko Wallet koa dia manana fampifanarahana amin'ny famantaranandro Android Wear. Ny faktiora dia azo alaina amin'ny endrika samihafa, ao anatin'izany ny sary raha sanatria ka ento haingana any amin'ny solosaina, telefaona, takelaka, ankoatry ny fitaovana hafa. Izy io dia iray amin'ireo isa tsara naoty indrindra.
Kitapom-bola: vola, teti-bola, Tracker fitantanam-bola
Monefy dia fampiharana maimaim-poana izay hanampy anao hifehy ny fandaniana isan'andro, manome fampahalalana voalohany rehefa nosokafana sy novonoina. Mazava ny interface ary tsotra ihany koa, ankoatr'izay dia azonao atao ny manefy zavatra avy amin'ny fikirana raha toa ka tianao ny hanana ny zava-drehetra amin'ny fomba milamina.
Ny fampiharana dia mamela anao handamina ny fandaniam-bola taloha, andro sy herinandro ary volana raha mbola voatendry ireo sokajy, dia mamela ihany koa ny faktiora halefa amin'ny rahona amin'ny alàlan'ny kopia voafafa. Izy io dia miasa miaraka amin'ny Dropbox, fitaovana iray anaovany backups hanana azy ireo eo am-pelatanana hatrany.
Monefy - fampiharana fandoavana ny vola sy fidiram-bola
Ny fampiharana dia mandamina ny zava-drehetra amin'ny fomba milamina, fidiram-bola, fandaniana ary ireo tsy ampoizina izay hampandre anao amin'ny alàlan'ny fampandrenesana. Ny fandaniana tsirairay dia haseho amin'ny loko manokana hitadiavana ilay iray izay matetika no vokarina, mety raha te-mena, maitso na hafa ianao.
1Money dia manolotra famintinana mandritra ny herinandro, volana na taona, mety raha tianao ny mandanjalanja ny vola miditra sy ny fandaniana amin'ny trano, an'ny orinasa na ny haka azy ireo amin'ny sokajy hafa. Ny fampiharana dia manome ny safidy fanaovana kopia backup hitahiry azy raha tianao ao amin'ny Google Drive.
1Money - Fandaniana, mpitantana, tetibola
Izy io dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra amin'ny Fintonic, indrindra ho an'ny sary an-tsaina ny fidiram-bola sy ny fandaniana, tonga lafatra raha te hitondra izany rehetra izany ianao amin'ny tsindry vitsivitsy monja. Vantany vao nosokafanao izy io, dia hanome anao ny fampahalalana amin'ny loko, ankoatry ny fahafantarana hoe ohatrinona ny totalinao ao amin'ny kaonty sy ny fandanianao isan'andro, herinandro na volana.
Ny spendee dia mamela anao handamina ny vola hampiasana, na amin'ny euro, dolara, sterling pounds na ilay anananao manokana amin'izany fotoana izany. Manana fampandrenesana izy raha toa ka tsy maintsy mandoa vola isan-karazany ianao, indrindra raha tsy tianao ny manadino iray manan-danja. Ny fampiharana na dia manana naoty 2,9 dia nanangona fisintomana 1 tapitrisa mahery.
Mpanararaotra - Tetibola, fanaraha-maso ny fandaniana
Developer: SPENDEE as
Izy io dia fitaovana iray hamoronana teti-bola miaraka amin'ny fototra, Tonga lafatra ihany koa izany raha te hitondra ny vola laninao tsirairay avy ianao, mampandre anao rehefa mandany betsaka mihoatra ny ao an-tsainao ianao. Money Lover dia manana banky piggy virtoaly hitahiry vola kely ary hanana azy rehefa ilainao izany.
Ny iray amin'ireo tanjany mba ho safidy tsara indrindra amin'ny Fintonic dia ny fampidirana ny widget hiasa any aoriana ary hanome vaovao amin'ny fotoana tena izy. Money Lover koa dia mitantana carte de crédit ary azo ampiasaina amin'ny kaonty marobe izy io, na dia manana drafitra premium aza raha mila kaonty mihoatra ny roa.
Fitiavana vola - fandaniam-bola fanaraha-maso sy teti-bola
Tena mitovy amin'ny Fintonic izy io, na dia natao hampiroborobo ny tahiry aza ny fampiharana. Oingz dia hitahiry isan'andro isan'andro amin'ny fomba efa napetraka, fa mangataka alalana amin'ny mpampiasa foana. Raha tsy dia tsara ny raharaha ara-bola dia hanome anao drafitra hahafahana mitantana tsara kokoa ny zava-drehetra.
Oingz dia tonga lafatra raha te hahatratra tanjona ianao, androany dia zava-dehibe raha te hahatratra ny faran'ny volana araka izay tratra ianao. Ny fampiharana na dia natao ho tahiry aza Azonao atao ny mahita ny volanao, miaraka amin'ny fidiram-bola, ny fandanianao ary ny angon-drakitra mahaliana hafa fantatry ny olona.
Oingz - Mitahiry vola ary mahatratra ny tanjonao
Ny faniriana hitantana ny volanao amin'ny fomba mandeha ho azy iray amin'ny fampiharana tsara indrindra Toshi Finance dia natao ho an'izay, solon'ny Fintonic ary matanjaka kokoa aza. Azonao atao ny manafatra ny hetsika rehetra natao avy amin'ny kaonty banky sy ny carte de crédit anao, mba hitantanana ny zava-drehetra ho azy.
Ny fampiharana dia mamela anao hametraka fetra fandaniana ho an'ny sokajy tsirairay, ao anatin'izany ny safidy hampiatoana ny fampandrenesana ho an'ny fandaniana efa niandry ary efa akaiky hanakaiky. Mifandray amin'ny kaonty banky 14.000 mahery ny fampiharana, anisan'izany i Unicaja, Banco Santander, BBVA, Banco Sabadell, CaixaBank, ankoatry ny maro hafa izay misy avy any Espana, Eoropa ary kontinanta hafa. Olona 1 tapitrisa mahery no nisintona azy.
Toshl Finance - fandaniana, fidiram-bola ary teti-bola
Iray amin'ireo safidy tsara indrindra mankany Fintonic ny Bluecoins, fampiharana tsara raha tianao ny mahita ny vola miditra, ny fandaniana ary mamorona faktiora amin'ny fotoana rehetra ilainao izany. Ny mpampiasa dia tsy maintsy manampy ny karazana fandaniana amin'ny tanana, izay avelanao hanana ny zava-drehetra amin'ny fomba antsipiriany.
Izy io dia manana fomba fitsangatsanganana hampiasana azy amin'ny fifanakalozana vola mandeha ho azy ao amin'ny firenena misy anao, mety indrindra amin'ny tsy mila fanovana mandeha ho azy. Iray amin'ireo sarobidy indrindra izy io ao amin'ny Play Store, ankoatry ny fahalavorariana mifehy ny zava-drehetra amin'ny tontolo milay sy miloko.
Bluecoins- Vola sy tetibola
Developer: Rindrambaiko Mabuhay
Raha te hitantana matihanina ny kaontinao ianao, ny iray amin'ireo tsara indrindra amin'izany dia ny Money Pro. Ny fampiharana dia manana endriny tonga lafatra raha tianao hifehezana maso ny vola miditra sy ny fandaniana. Ny fitaovana dia mamorona kaonty manokana sy matihanina, samy maimaim-poana miaraka amin'ny mpampiasa farafaharatsiny.
Ny Money Pro dia manome ny fahafaha-mamaritra ny fetra amin'ny tetibola, mamorona sary ary mampiseho vaovao momba azy ireo tsirairay eo am-piandohana sy amin'ny faran'ny asa fanazaran-tena tsirairay. Ny fampiharana dia efa nandritra ny 10 taona tao Apple, saingy afaka taona vitsivitsy dia nanao ny dingana haingana tamin'ny sehatra Android izy.
Money Pro - Vola manokana, tetibola
Fampiharana mety indrindra raha te-hitantana ny volan'ny vondrona ianao, farafaharatsiny izany no nomarihin'ilay mpamorona ao ambadik'ity fitaovana ity. Ny Splitwise dia ahafahanao manampy mpikambana mba hitazomana ny fifehezana tanteraka ny kaonty, na an'ny tena manokana na amin'ny orinasa.
Tsotra ny fitantanana ny Splitwise, ny olona tsirairay dia hanome ny fandaniana amin'ny vola ampidirin'ny tsirairay amin'izy ireo. Mety indrindra raha te hizara vola lany amin'ny ankohonana ianao na mila fitantanana renivohitra amin'ny alàlan'ny olona atokisana. Splitwise dia manana kintana 4,4 amin'ny 5 ary mahatratra 10 tapitrisa ny fisintomana.
Mpitantana ny fandaniana, fidiram-bola ary ny tetibola
Ny fitazonana ny vola miditra sy ny fandaniam-bola isam-bolana dia asa tsotra raha mifehy azy ho azy amin'ny alàlan'ny rindranasa amin'ny findainao ianao. Ny mpitantana ny fandaniana, ny fidiram-bola ary ny tetibola dia tonga lafatra satria mora ampiasaina ary asehoy anao ny zava-dehibe rehetra amin'ny pejin'ny fitaovana rehefa mandeha.
Mampiseho ny sary an-tsary mampiseho ny laminasa sy ny vola lanyAzonao atao ihany koa ny mitahiry vola raha te-hihary vola raikitra isan'andro, isan-kerinandro na isam-bolana. Azonao atao ny mampiasa ny iray amin'ireo maodelin'ny fampiharana, manohana vola isan-karazany ihany koa izy, anisan'izany ny be mpampiasa indrindra toy ny euro, dolara na pounds, ankoatry ny hafa.
Mpitantana ny vola, fidiram-bola ary ny tetibola, ny vola
Ny fandaniana amin'ny fanaraha-maso
Ho an'ny maro dia sarotra ny mitantana volaMba hanamorana ny fiainana dia teraka ny fampiharana «Fandaniana« Control ». Ny fitaovana dia mifehy ny fandanianao manokana sy ny ankohonanao, izany rehetra izany amin'ny fomba iray nosarahan'ny takelaka roa.
Anisan'ireo mampiavaka azy ny fahaizanao manivana ireo zavatra tadiavinao ireo, ampio safidy mitahiry hafa mba hahafahanao manangona vola be indraindray. Ny fandaniana amin'ny fanaraha-maso dia noforonin'i CASorin ary manana fampidinana iray tapitrisa eo ho eo izy androany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny safidy tsara indrindra amin'ny Fintonic amin'ny Android